Andro manerantany iadiana amin’ny SIDA 2020: Ahoana ny fomba niatrehan’i Karaiba ny VIH nandritra ny COVID-19 ? · Global Voices teny Malagasy
Misy ny fanerena hanaparitahana ireo fitaovana fanaovana fitiliana tena.
Voadika ny 02 Janoary 2021 13:19 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, русский, Español, Esperanto , English
Ribà mena mipetraka ambony tanam-behivavy ho fanohanana ny Andro manerantany iadiana amin'ny SIDA. Sary an'i Marco Verch Professional Photographer ao amin'ny Flickr, CC BY 2.0.
Anatinà taona izay manohy mizaha ny fahatanjahan-tsain'ny tsirairay, ny lohahevitry ny Andro Manerantany iadiana amin'ny SIDA, ankalazainy isan-taona ny 1 Desambra, dia ny “Firaisankina manerantany, andraikitra ifampizaràna”. Maro ireo fikambanana tsy miankina ao Karaiba sy ireo vondron'ny tanora nampindrana ny feony ho an'ny tolona fandripahana ny aretina sy ho fankalazana ny hetsika amin'ny fomba maro.
Ny 22 Novambra, talohan'ny Andro Maneran-tany iadiana amin'ny SIDA, nandray fotoam-pivavahana virtoaly ho fanomezam-boninahitra ireo rehetra voa ny Tambajotra Jamaikàna ho an'ireo mitondra ny tsimokaretina, izay miady ho an'ny zon'ireo miaina miaraka amin'ny VIH/SIDA. Toy ireo fiarahamonina maro hafa ao Karaiba, tena mpino be ny ao Jamaika, ka fomba famindra mahaliana ny fampiasana ny vavaka ho mpitondra firaisankina anatinà firenena izay matetika ampiasàna ny finoana hanilikilihana ny olona LGBTQ+ sy VIH+.
Nandritra izay fotoana izay, nanamarika ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny Hasambarana ao Barbados fa nanjary ho zava-dehibe kokoa ny fanomezana valiny eo amin'ny sehatra maro samihafa momba ny VIH/SIDA noho ilay areti-mandringana COVID-19 :
Asa fivelomana voarahona, rojom-pamatsiana voatohitohina, fikarakarana ara-pahasalamana miovaova izay nisy fiantraikany teo amin'ny fahazoana fitsaboana… Ampahany fotsiny ihany ireo amin'ireo fanamby atrehan'ny olona voan'ny VIH […] amin'izao 2020 izao noho ny areti-mandringana.
Na dia nanao ezaka goavana aza i Karaiba hanenàna ireo fahafatesana noho ny SIDA (avy amin'ny 11.000 isa tamin'ny 2010 ka nihena ho 6.900 tamin'ny 2019) sy ireo tranga vaovaon'ny VIH (teo amin'ny 18.000 isa teo ka lasa 13.000 isantaona), mbola olana iray lehibe eo amin'ny fahasalamam-bahoaka ny fandrindràna ny aretina anatinà faritra iray izay nanesorana ny fanabeazana ara-pananahana tsy ho ao anatin'ny fandaharam-pianarana, sy mbola isian'ny fanilikilihana manodidina ilay aretina.
Nanolotra hevitra ny hanaparitahana ireo fitaovana fanaovana fitiliana tena manerana an'i Karaiba ny Pan American Health Organization (PAHO) :
Nifantoka tamin'ny sasany amin'ireo fivoarana natao tanatin'ny ady amin'ny VIH/SIDA ny Masoivohon'i Etazonia ao Barbados, anatin'izany ny fametrahana ny Labaoratoara Best Dos Santos, izay manampy ireo olona manana risika be indrindra hahazo fitiliana VIH ara-potoana mba ahafahany miatrika fitsaboana mamonjy aina eo noho eo.
Nanamarika ny Dr. Rosmond Adams, talen'ny Pan-Caribbean Partnership Against HIV/AIDS (PANCAP), fa nisy fiantraikany teo amin'ny fahafahana nanome ireo tolotra mifandraika amin'ny VIH ny famerana isam-paritra noho ny COVID-19, tanatin'izany ireo fepetra fanabeazana sy fisorohana, ny fitsaboana sy ny fitiliana anaty labaoratoara.
Na izany aza, firenena maro no nandray fepetra vonjimaika. Nampiasa ny tambajotran'ireo mpiasa sosialiny i Belize tamin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena hanaovana tombatombana ny filàn'ny olona tratry ny tsimokaretina VIH. Nahazo tohana manampy amin'ny fanohanana ara-tsakafo sy ara-bola kosa i Jamaika. I Barbados, ankoatry ny fanolorana fizahana ara-pahasalamana virtoaly, dia nandamina ny fandefasana sakafo sy fanafody ho an'ireo marary.
Tsy nanadino ny maha-zava-dehibe ny nanamarihana ny Andro manerantany iadiana amin'ny SIDA tamin'ity taona ity teo afovoan'ny areti-mandringana ny vondrona Facebook Queer Caribbean History :
[…] tsaroanay ny niandohan'ity areti-mandringana ity nandritra ireo taona nahanginan'ny valanaretina, sy ny hoe na eo aza ny fiantraikany amin'ny faritra misy anay, dia mahazaka dona foana izahay.
Nanampy ny Youth Ambassadors TT :
Asehon'ny COVID-19 indray ny fomba ifandraisan'ny fahasalamana amin'ireo olana lehibe hafa, toy ny fampihenana ny tsy fitoviana, ny zon'olombelona, ny miralenta, ny fiarovana ara-tsosialy ary ny fitomboan'ny harinkarena.
Ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny Firenena Mikambana momba ireo Tanjona ho an'ny Fampandrosoana Maharitra, manantena ny hampitsahatra ny valanaretina VIH / SIDA i Karaiba amin'ny taona 2030.